ဗဟုသုတ | Page2| BFC | Bahosi Fertility Centre
Home » ဗဟုသုတ
မမျိုးဥလေးထဲသို့ အမျိုးသားသုတ်ပိုးလေးထိုးသွင်းခြင်းဖြင့် သန္စေအောင်စေသော ( Intracytoplasmic Sperm Injection - ICSI )နည်းဖြစ်သောအဆင့်မြင့် ဖန်ပြွန် သန္ဓေသားနည်းပညာ အကြောင်းကို ဗဟုသုတ အဖြစ် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သားသမီးရရှိရန် ခက်ခဲနေသူများအနေဖြင့် ယခုလို အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့် သားသမီးရတနာ ရရှိအောင်ကြိုးစားပြီး မိသားစု ဘဝလေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်းလေးပါးလိုက်ပါတယ်။
IVF ( Invitro Fertilization )သို့ ဖန်ပြွန်သန္စေသား ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို ဝေမျှလိုပါသည်။BFCမှာမြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးIVF Centre ဖြစ်သည့်အပြင် နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မှီနည်းပညာများကိုအသုံးပြု၍ ကျွမ်းကျင်သောဆရာ၀န်ကြီးများဆရာမများမှ သားသမီးရရန်ခက်ခဲနေသူများကိုကူညီပေးနေပါသည်။
သုတ်ရည်ထဲတွင် သုတ်ပိုးမပါရှိသော အမျိုးသားများ သားသမီးရရှိစေရန် မျှော်လင့်ချက်များ မကုန်ဆုံးသေးပါ။
အောက်တွင် post လုပ်ထားသော video ဖိုင်လေးထဲကလို ကပ္ပယ်အိတ်အတွင်းမှ အသားစထဲရှိ ရှင်သန်သော သုတ်ပိုးကို အသုံးပြု ၍ ဖန်ပြွန်သန္ဓေသားနည်းပညာဖြင့် သားသမီးရရှိအောင် ကြိုးစား နိုင်သည့်သတင်းကောင်းကို တဖန်ပြန်လည်၍ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Assisted Hatching, one of the latest technologies!
This is the movie how we do it!
Let's see the preparation of the sperm for Intrauterine Insemination ( IUI )!